Hery - Tsiky dia ampy | Izaho sy ny ahy | 14
Arahabaina nahita masoandro i Tsiky
2010-09-07 @ 10:36 in Izaho sy ny ahy
Tonga teto an-tany tamin'ny alahady teo hono i Tsiky. Zazakely tahaka ny zaza rehetra. Ny nanaitra ahy fotsiny, ankoatr'ilay anarana nomen-dray sy reniny (akama) azy dia ny zokin'i Tsiky dia mitovy taona amin'i Aina, izany hoe 19 volana izao.
Mirary soa ho an'izy roa Ray aman-dRenin'i Tsiky Soary sy ny zokin'i Tsiky izay hendry be fa tsy mba mialona an-jandriny... Falifaly indray aza hono izy mahita an'ilay zazakely. Fa mba eritrereto hoe i Aina anie no manan-jandry sahady e? Toa ohatra ny mampalahelo izany ho hahita azy.
Izahay koa aloha ohatra an'izany e. Ny elanelan-taonako amin'ny zandriko dia 18 volana. Dia ny elanelan'io zandriko io amin'ny zandriny dia 12 volana katroka... ka angamba tsy maninona ihany. Matotra ny zaza rehefa misy zandriny (Jereo fotsiny aho lolll)
Mamerina ny firariantsoa eee
Facebook ato am-piasana, tsy tafa ny sakana
2010-08-31 @ 07:07 in Izaho sy ny ahy
Fantatrareo ihany moa fa efa am-bolana maro aho izay no tsy mampiasa facebook. Tamin'ny volana febroary tany ho any dia resiko lahatra koa ny tato am-piasana hisakanana ny facebook ato am-piasana. Nojerena mantsy ny statistika tao amin'ny routers ka ny 80%-n'ny sites mandalo ao dia facebook daholo. Ary ny fotoana ampiasana ilay facebook dia amin'ny fotoana fiasàna ny ankamaroany. (tohiny)
Tahotry ny zazakely
2010-08-25 @ 12:58 in Izaho sy ny ahy
Nisy fotoana elaela izahay tsy nandefa tele satria tsy tongan'ny satellite eny aminay fa ao ambadiky ny tendrombohitra. Nahafinaritra ery ny fiainana tsy nisy télé zany :-) (tohiny)
2010-06-21 @ 13:10 in Izaho sy ny ahy
Mety ny fampidirana sary ka
Mandeha ihany ilay fotoana kle
2010-05-18 @ 07:00 in Izaho sy ny ahy
Tamin'ny voalohan'ny volana avrily aho no nieritreritra hamoaka ilay module vaovao ao amin'ny namana. Resaka group le izy. [ Hozy indray zao nareo hoe mitovitovy amin'ny FB izany. Ka ny FB aza nanao mitovitovy amin'ny serasera koa :-) fa tsy any ny olana ] Hatramin'izao tsy mety vita kanefa kay efa misasaka mahery ny volana may. Ka ezahina hovitaina amin'ity faran'ny volana ity dia avoaka amin'ny jiona raha mety. Mandeha be ihany ny fotoana an.
Ka i Aina aza moa efa mandeha be... efa miakatra tohatra i leiry raha vao tsy hitahita. Efa mihoatra ny vala e. Tenenina foana fa e e e. Nasiana (nividianana mihitsy) an'irony karipetra matevina irony ny trano, fa aleony indray mandeha manara-tsisiny eny amin'ilay tsy misy karipetra (tapis no dikan'ny karipetra). Mahafinaritra ny mahita azy rehefa mianjera sy mitsangana malaky. Raha toa izany daholo moa ny fiainana. Tsy menatra mihitsy izy na mitaredretra eo rehefa mianjera fa tonga dia miezaka mitsangana malaky dia mamindra indray na dia fantany aza fa mbola hianjera rehefa kelikely. Rehefa lehibe mantsy no potraka toa malaina hitraka... mora kivy hoe tsy hahatratra ilay toerana haleha.
Mandeha be ny fotoana fa 6 taona omaly izay mbola toy ny vao omaly :-) Tadidiko na ny akanjo na ny ora na ny volon-danitra... ary ilay andry vato moa fahafiry?
«Mialoha 1 2 3 ... 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ... 32 33 34 Manaraka»
Afa-po mampiasa Linux
Que des idées f(x)
Nahoana kosa no idina ny fiangonana?